पेशल आचार्य/ चुडामणि शर्मालाई भ्रष्टाचार प्रकरणमा अदालतबाट सामान्य तारेखमै मुद्दा लड्न पाउने आदेश भएका बेला मुलुकमा एकाएक आएको बाढीको वितण्डाले पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म रौद्र रूप देखायो । बाढीका कारण कयौँ गरिब र निमुखा मरे । हजारौं घाइते भए र लाखौं बेघरबार भएका छन् ।
‘अनवान्टेड गेस्ट’ भएर किन जाने भारत ?
नरेन्द्रराज पौडेल/ भर्खर बिहे गरेर घर भित्र्याएकी बुहारी पहिलोपाला माइत जान हतारिएजस्तै भएका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हिजोआज । भारत भ्रमणमा जान उनले देखाएको आत्तुरीले पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीहरुको लहरमा सबैभन्दा हडबडे पात्रको पंक्तिमा उनलाई उभ्याएको छ । समय, परिस्थितिको ख्याल नगरी किन यो आतुरता देखाएका हुन् उनले ? बुझ्न कठिन छ ।
महाभारतकी कुन्ती – १७
युधिष्ठिरका धेरै राम्रा कुराहरु छन्, अडानका कुराहरु छन् र नैतिकताले भरिएको जीवन छ । तर एउटा कुरामा भने मैले अझै बुझिन– किन द्रौपदीका विषयमा भने पाँचै भाइकी साझा हुनुपर्छ भनेर युधिष्ठिरले जिद्दी गरेको होला ? परिवेत्ता र परिवेत्तीको कुरा किन उठाएको होला ?
पेशल आचार्य-- प्रधानमन्त्रीले खाल्डाखुल्डी पुर्न आदेश दिएको पन्ध्र दिन नाघिसक्दा पनि राजधानीका धेरैजसो खाल्डाखुल्डीहरू झन्झन् बटुवा र सवारी साधनका लागि एम्बुस बनेका बन्यै छन् । आक्रोशित र नैराश्य छन् जनताहरू । सरकार वाचाल र महानगरपालिका बहुरङ्गी बनेको छ । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको उखान चरितार्थ भैसक्यो ।
असम्भव छैन एउटै मतपत्रबाट प्रदेश र संघको निर्वाचन
हामीलाई लागेको थियो, हाम्रो निर्वाचन गर्ने क्षमतामा श्रीवृद्धि भएकै हो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचन एउटा नियमित आकस्मिकता हो र त्यो आकस्मिकता बारम्बार दोहोरिने भएकाले नै आवधिक निर्वाचन आफैँ प्रजातन्त्रको मुख्य विशेषतामा पर्छ । त्यसका लागि नेपालले दक्षता हासिल गरेको मान्ने गथ्र्यौँ ।
नेपाली कांग्रेस अब कता ?
﻿विजय पौडेल - “शेरबहादुरजी सामान्य हेर्दाखेरि एउटा सरल मान्छे नै देखिनुहुन्छ । तर, उहाँ धेरै चलाख मान्छे हो ।” इमेज च्यानलको कार्यक्रम ‘सम्भाष’मा ‘पार्टी सभापति कस्तो किसिमको व्यक्ति हो ?’ भनी सोधिएको प्रश्नमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको जवाफ हो यो ।